Nepali Christian Bible Study Resources - मुक्ति र इनामहरू
» बाइबलको अर्थ प्रकाशन » ध्यानमा राख्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू » ९-मुक्ति र इनामहरू
येशूले जवाफ दिएर उसलाई भन्नुभयो: "यदि तिमीले परमेश्वरको दानलाई जानेकी भए, र 'मलाई पानी पिउन देऊ' भनी तिमीलाई भन्ने को हो, चिनेकी भए तिमीले पो उनीसित माग्नेथियौ, र उनले तिमीलाई जिउँदो पानी दिनेथिए" (यूहन्ना ४:१०)।
"हे सबै तिर्खाउने हो, आओ, पानीनेर आओ। अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ, विनापैसा र विनादाम दाखरस र दूध किन" (यशैया ५५:१)।
अनि आत्मा र दुलहीले भन्नुहुन्छ: "आओ!" अनि जसले सुन्छ, उसले भनोस्: "आओ!" अनि जो तिर्खाउँछ, ऊ आओस्। अनि जसले चाहन्छ, उसले सित्तैंमा जीवनको पानी लेओस् (प्रकाश २२:१७)।
अनि उनले त्यसलाई भने: "स्याबास असल दास! तिमी एकदम थोरैमा विश्वासयोग्य भएका हुनाले अब दसओटा शहरमाथि अधिकारी होऊ" (लूका १९:१७)।
प्रकाश २:१० मा उनीहरूले "जीवन" पाउने भनिएको छैन किनकि स्मर्नाका पवित्र जनहरूसित जीवन अर्थात् अनन्त जीवन थियो र उनीहरू धार्मिकताका खातिर कष्ट भोग्दैथिए; तर उनीहरूले "जीवनको मुकुट" पाउने भनिएको छ।
उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो: "तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ; शान्तिसित जाऊ" (लूका ७:५०)।
तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो -- नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माको नवीकरणद्वारा (तीतस ३:५)।
अनि गवाही यही हो -- परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ (१ यूहन्ना ५:११)।
साँचो विश्वासी र नामधारी विश्वासी »